Madaxweyne Xasan SHeekh oo manta gaarey magaalo madaxda gobolka SH/dhexe ee Jawhar. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Madaxweyne Xasan SHeekh oo manta gaarey magaalo madaxda gobolka SH/dhexe ee Jawhar.
Madaxweyne Xasan SHeekh oo manta gaarey magaalo madaxda gobolka SH/dhexe ee Jawhar.
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi balaaran oo uu horkacayo ayaa goor-dhaw oo maanta ah gaaray degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe oo lagu wado inuu si rasmi ah uga furmo shirka lagu dhisayo maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Madaxweyne Xassan Sheekh waxaa socdaalkiisa Jowhar ku wehlinaya, Wasiirka Arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, Madaxweynaha maamulka Galmudug, madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, xildhibaanno iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Somalia. Madaxweynaha ayaa markii uu ka dagay garoonka diyaaradaha ee Jowhar, wuxuu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, intaas kaddib ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay kooxda bar-baraarta oo garoonka lagu sii diyaariyay.
Safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Jowhar ayaa la xiriira furintaanka shirka dhismaha maamulka labada gobol Hiiraan & Sh/dhexe, iyadoo saacadihii ugu danbeeyay magaalada Jowhar ku sii qul qulayeen ergo kala duwan oo ka qeyb-qaadaneysa shirka. Ugu dambeyn, guud ahaan marka la eego waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka Jowhar, waxaana ciidamola dhigay wadooyinka laga soo galo Jowhar, waxaana la xiray dhamaanba jidadka gala halka lagu qabanayo shirka dhismaha maamulka labada gobol.
Wararka kasoo kordha shirka Jowhar waxaad kula socon doontaan wararka soo socda ee warsom haddii ALLE ogolaado.
Previous articleKulajekii gaarisa ee hadda ka hor ay weerareen dagaalyahanada AL-shabaab oo maanta dib loo furey.
Next articleWufuud uu hor kacayo gudoomiyaha barlamaanka dawlada federalka prof.Jawaari oo kismaayo ka degey.